သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာနည်း Christian Online Magazine MYATMINGALAR
သမ္မာကျမ်းစာသည် စာအုပ်အားလုံးအနက် အထွဋ္ဋ်အထိပ် (အမြင့်မြတ်ဆုံးသော) ဖြစ်သော စာအုပ်ပေတည်း။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် လူသားတို ့ကို အမိန် ့ရှိတော်မူသော စာအုပ်ဖြစ်၏။ မြင့်မြတ်သန် ့ရှင်းသော ညွန်ကြားမှုကို ပေးသည့် စာအုပ်လည်းဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းချိန်၌ နှစ်သိမ့်မှုကို ၄င်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည့်အခါ၌ လမ်းညွန်မှုပေးခြင်း၊ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ အပြစ်များ အတွက် ဆိုဆုံးမခြင်းနှင့် ကျနိုပ်တို ့လိုအပ်သည့်အရာများကို နေ ့စဥ်လျို ့ဆော်ပေးလျက် ရှိသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် စာအုပ်တအုပ်တည်းသာမဟုတ်။ စာအုပ်ပေါင်းချုပ်တအုပ်ဖြစ်ပြီး စာပေရသ မျိုးစုံနှင့် ပြည့်လျက်ရှိသည်။ သမိုင်း ရာဇဝင်အကြောင်းအရာများ၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ အထုပ္ပတိ၊ ကြိုတင်ဟောကြားချက်များ၊ ဒဿနဗေဒ၊ သိပ္ပံနှင့် စိတ်ဝိညာဥ် လျိုဆော်မှု ရစေသော စာပေရသများ ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို ့ကြောင့် ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုသော်၄င်း၊ အချို ့အပိုင်းများကို၄င်း၊ ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း ၁၂၀၀ ထက်မက ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး၊ နှစ်စဥ်ရောင်းချရသော လုံးချင်းစာအုပ်များအနက် အရေအတွက် အများဆုံးရောင်းရသော စာအုပ်တအုပ်လည်း ဖြစ်သည်။
လူကြီး လူငယ်မရွေး မေးနေကြသော ကြီးမားသည့် မေးခွန်းများ၏ စစ်မှန်သော အဖြေများကို သမ္မာကျမ်းစာကသာလျင် ပေးနိုင်စွမ်းရှိ၏။ ဤမေးခွန်းများမှာ “ကျုနိုပ်သည် မည်သည့်နေရာက လာသနည်း။” “မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်နည်း။” “အဘယ့်ကြောင့် ဤလောကမှာ ရှိနေပါသနည်း။” “သမ္မာတရားကို မည်သို ့သိနိုင်သနည်း။” ဟူသော မေးခွန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော အကြောင်းအရာများကို ဖွင့်ပြသည်။ လူသားတို ့၏ ရင်ဆိုင်ရသည့် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း နှင့် အပြစ်ကြောင့် ခံစားရသည့် ပြဿနာအကြောင်းရင်းများကို ရှင်းထားသေး၏။
သမ္မာကျမ်းစာ တအုပ်လုံး၏ ကြီးမြတ်သော အကြောင်းရင်းမှာ သခင်ခရစ်တော် အကြောင်းနှင့် လူသားတို့ကယ်တင်းခြင်း ရရန်အတွက် သခင်ယေရှု ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆောင်ရွက်ချက်ပေတည်း။ ခရစ်တော်၏အကြောင်းနှင့် သူ၏ အမှုတော်အကြောင်းများကို ဂတိတော်ထားရှိခြင်း၊ ကြိုတင် ဟောပြောထားခြင်း၊ ပုံတော်ထားခြင်းတိုကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ နိမိတ် လက္ခ္စဏာ အဖုံဖုံဖြင့် တွေ ့မြင်ရသည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်လည်း သခင်ခရစ်တော်၏ သမ္မတရားနှင့် ကောင်းမြတ်မှုကို ဘော်ထုတ်ထားသေးသည်။ သြဝါဒစာများတွင်လည်း ခရစ်တော်၏ သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ခရစ်တော်သည် နောက်တဖန် ဘုန်းအသရေ ထွန်းတောက်စွာဖြင့် ပြန်လာမည့်အကြောင်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ကြိုတင်ဟောကြားထား၏။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ရေးသားထားသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့် ဤသမ္မာကျမ်းစာ၏ မဟာတာဝန် တရပ်မှာ သခင်ယေရှုတည်းဟူသော အသက်ရှင်လျက်ရှိသည့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ထုတ်ဇေါ်ရန် ဖြစ်ပေသည်။
ဒေါက်တာ ဝေးလ်ဘာအမ်။ စမစ်သ် ( Dr. Wilbur M. Smith) က သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှု ့လေ့လာ ခြင်းဖြင့် ရရှိသော အကြောင်းရင်း ၇ ချက်ကို တင်ပြထားသည်။
၁၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျနိုပ်တို ့၏ အပြစ်ကို ဘော်ထုတ်ပြီး စီရင်ချက်ချသည်။
၂၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျနိုပ်တို ့ကို ညစ်ညမ်းသော အပြစ်များမှ ဆေးကြောသန် ့စင်ခြင်းဖြင့် ကူညီထောက်မသည်။
၃။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျနိုပ်တို ့ကို ခွန်အားပေးသည်။
၄။ သမ္မာကျမ်းစာသည် မည်သည့်အရာကိုလုပ်ရမည်ကို လမ်းညွန်ပေး၏။ (ဦးဆောင်လမ်းညွန်သည်။)
၅။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျနိုပ်တို ့အပြစ်ကို အောင်နိုင်ရန် ထား (ဓါး) ကိုပေးတော်မူ၏။
၆။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျနိုပ်တို ၏ ဘဝအသက်တာကို သီးပွင့်ရန် (အကျိုးရှိစွာ လျောက်လှမ်း နိုင်ရန်) ပြုလုပ်ပေးသည်။
၇။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျနိုပ်တို ့အား ဆုတောင်းနိုင်သော စွမ်းအားကို ပေး၏။
သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာရန် စာပေကျမ်းဂန်စု (awhole library of books ) တခုလုံး မလိုပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကပင် ဝေဖန်သုံးသပ်၍ ဘော်ပြခြင်း၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဟခြင်းတို ့ကို လုပ်ဆောင်ပေးလေသည်။ ဤကျမ်းစာအုပ်တွင် ဘော်ပြထားသော လမ်းညွန်မှု အကူအညီများ အားဖြင့် ကျမ်းစာကို သက်ဆုံးတိုင်အောင် လေ့လာနိုုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁။ သမ္မာကျမ်းစာကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်း
( Personal Bible Study)
က။ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း
( Devotional Bible Study )
ကျမ်းစာကိုလေ့လာခြင်းသည် ဦးတည်ချက်မဟုတ်ပဲ ဘုရားသခင်ကိုသိပြီး အလိုတော်ကိုလက်ခံလိုက်နာရန် ဦးတည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို ့ကြောင့် ၀ိညာဥ်ခွန်အားရရန် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို သိပ္မံပညာရှင်။ ဆေးဆရာဝန်ဖြစ်သူ (Dr. Howard A. Kelly) က ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်။ အသေအချာဂရုစိုက်၍ နေ ့စဥ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာများမှ မိမိစိတ်နှလုံးထိ ထင်ဟတ်ဖတ်ရှုလေ့လာရသည်ဟု ပြောဖူးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ဖတ်ရှုရာတွင် အထောက်အကူပြုသည့် အကြံပြုချက်များကို ဖေါ်ပြပါမည်။
(၁) ကျမ်းစကဖတ်ခြင်းကို ဆိုတောင်းခြင်းဖြင့် အစပြုပါ (ဆာ ၁၁၉း၁၈၊ ယော ၁၆း ၁၃ – ၁၅)
(၂) ဖတ်ခဲ့သောကျမ်းပိုဒ်များနှင့် ပတ်သတ်သည့် အေရးပါသောအချက်များကို မှတ်စုရေးထားပါ။ဤအတွက် မှတ်စုစာအုပ်ကလေး တအုပ်ထားသည့်ပါသည်။
(၄) ကျမ်းစာ၏ အခန်းကြီးတခုလုံး သို ့မဟုတ် ကျမ်းပိုဒ်၏ စစ်မှန်သော အဓိပ္မါယ်ကိုရှာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည့် ဘော်ပြပါ မေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်ကို မိမိမေးပါ။ ထို ့နှောက် အဖြေများကို မှတ်စုစာအုပ်တွင် ရေးချပါ။ (က) ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိကအချက်ကား အဘယ်နည်း။ (ခ) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဘော်ပြသနည်း။ မည်သူက ပြောနေသနည်း။ မည်သူ ့ကို ပြောနေသနည်း။ မည်သူက သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါသနည်း။ (ဂ) ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိကကျမ်းချက်ကား အဘယ်နည်း။ (ဃ) ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းကို ကျနိုပ်အား အဘယ်သို့သွန်သင်နေပါသနည်း။ (င) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျနိုပ်ဝန်ချတောင်းပန်ရမည့် အပြစ်မျိုးကို ဘော်ပြထားပါသလား။ (စ) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျန်ုပ် နာခံရမည်း အမိန် ့တော် တခုခု ပါဝင်ပါသလား။ (ဆ) ကျန်ုပ်အတွင် ဂတိတော်တခုခုကို ပေးနေပါသလား (ဇ) ကျန်ုပ်လိုက်နာဖို့ညွန်ကြားချက်တခုခု ပါဝင်ပါသလား၊
(၅) ၀ိညာဥ်ရေးရာ နေ ့စဥ်မှတ်တမ်း (Spiritual diary) စာအုပ်တအုပ်ထားပါ၊ နေ ့စဥ် ဘုရားသခင်က မိမိအား ကျမ်းစာမှ တဆင့် ဘာပြောနေသည်ကို ရေးမှတ်ပါ၊
(၆) သမ္မာကျမ်းစာမှ ကျမ်းချက်များကို အလွတ်ကျက်ပါ၊ အသက်ကြီး၍ အလွတ် မကျက်နိုင်တော့ဘူးဟု မထင်ပါနှင့်။ စက္ကူကပ်ပြားလေးများတွင် ကျမ်းချက်များကို တဖက် ကျမ်းကိုးများ (Reference) များကိုတဖက်ရေးထားပါ။ ၄င်းတို ့ကို ဘယ်သွားသွား ထည့်ယူသွားပြီး ရထားစောင့်နေစဥ်ဖြစ်စေ၊ တဦးတယောက်ကို စောင့်နေစဥ်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ရတိုင်း ပြန်၍စစ်ဆေး ကျက်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းတနည်းမှာ ညအိပ်ယာမဝင်ခင် မိနစ်အနည်းငယ် ကျမ်းပိုဒ်များကို စဥ်းစားလျင် အိပ်ချိန်၌ မသိစိတ် (subconscious) မှ၄င်း။ ကျမ်းပိုဒ်များကို မှတ်မိနိုင်စွမ်း ပေးလိမ့်မည်။
(၇) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံပါ။ ရှင်ပေါလုက တိမောသေကို မိန် ့မှာ သကဲ့သို “ထိုကျမ်းစာရှိသမှသည် ဘုရာသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၏“ ၂တိ ၃း၁၆။ ထို ့ကြောင့် “နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာရုံမျသာ ပြုသောသူမဟုတ်၊ တရားကိုကျင်သောသူ ဖြစ်ကြလော့၊” ဟု မိန် ့မူထားသည်။ ယာ ၁း၂၂
(၈) ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မှီလေးတွင် Navigators အသင်းအဖွဲ ့တခုကို အမျိူးသားတစုမှ ဖွဲ ့ထားသည်၊ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ ့မှ ပုံစံတရပ်မှာ (က) ဆုတောင်းပြီးသောအခါ ပဌမအကြိမ် တွင် ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖြေးဖြေးနှင့် အသံမထွက်ပဲ ဖတ်ပါ။ နောက်တကြိမ်း ဖတ်ရာတွင် အသံထွက်ဇတ်ပါ။ (ခ) မှတ်စုစာအုပ်ကြီးတအုပ်တွင် စာမျက်နှာတခုစီတွင် ကော်လံများချပြီး ဘော်ပြပါ ခေါင်းစဥ်များကို ကော်လံအလိုက် အခန်းကြီးခေါင်းစဥ်၊ အဓိက ကျမ်းချက်၊ ထူးခြားသော သမ္မာတရား အပြန်အလှန်ကျမ်းညှန်း၊ ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ဆိုင်သော အခက်အခဲများ၊ သင့်အတွက် မည်သို့အသုံးကျပုံ၊ ကျမ်းပိုဒ်၏ အကျဥ်းချုပ် သို့မဟုတ် ကျောရိုးအချက်အလက်များ (outline) ဟူ၍ ကော်လံတခုစီတွင် မိမိနှစ်သက်သောအချက်များကို ရေးမှတ်ထားပါ။
ဤလေ့လာနည်းအားလုံးကို တကြိမ်အတွင်း အသုံးပြုရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ တခုပြီးမှ တခု ဖြေးဖြေးခြင်းအသုံးပြုပါ။ မိမိနှင့်ကိုက်ညီမည်ထင်သည့် လေ့လာနည်းများ အကြံပြုချက် များကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်၏အရင် သန်းပေါင်းများစွာသောသူများ လေ့လာသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာလေလေ ပို၍ ဖတ်ချင်လေလေ ဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အမှန်တရားများကို ပို၍ လေးလေးနက်နက် လေ့လာလိုသူများအတွက် အကြံပြုချက်များကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ခ။ သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာ အသိပညာအတွက် လေ့လာခြင်း
( Study for Bible Knowledge )
– အခန်းကြီးလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Chapters )
– အပိုဒ်လိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Paragraphs )
– ကျမ်းချက်များအလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Verses )
– ကျမ်းတစောင်းချင်းအလိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Books )
– စကားလုံးများအလိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Words )
– အထုပ္မတိအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Biographies )
သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာရာ၌ တန်ဘိုးရှိသောနည်းလမ်းမြောက်များစွာရှိသည်။ ကျမ်းစာကို အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် လေ့လာသကဲ့သို့ ကျမ်း (စာစောင်) တိုင်းတွင် ကြီးမြတ်သော အမှန်တရားများ ပေါ်လွင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အနုစိတ် မှန်ဘီလူးနှင့် ကြည့်သကဲ့သို့ ကျမ်းစာကိုလေ့လာရာ၌ ၀ိညာဥ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော ကွယ်ဝမှုတို့၏ ဆန်းကြယ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်တို့ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ပို၍ လေးလေးနက်နက် လေ့လာလိုလျင် လက်တွေ့အရ ထိရောက်သောနည်းလမ်းများစွာကို ဤအပိုင်းတွင် ဘော်ပြထားသည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ စနစ်ကျသောနည်းဖြင့် တသွေမတိမ်း ကျမ်းစာကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ နိဂုံး
သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာသော အခြားနည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသေးသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာခြင်း။ လူမူရေးဆိုင်ရာ လေ့လာခြင်း။ ယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လေ့လာနည်း။ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ လေ့လာနည်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသော ကျမ်းစာလေ့လာနည်းအားလုံးကို အသုံးပြုပါ။ နည်းတမျိုးကိုသာ စွဲ၍ မသုံးပဲ ငြီးငွေ့ခြင်း ကင်းရန် နည်းအမျိုးမျိုးကို လှည့်၍ အသုံးပြုကြည့်ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ထာဝရမှန်ကန်သည့်အကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ သိရှိနိုင်ပြီး ၄င်းတို့ကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် မိမိ၏ ဘဝအသက်တာတွင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစားနိုင်ကြ မည်ဖြစ်သည်။
( Family Bible Study )
ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်တခုတွင် မိသားစု ဝတ်ပြုခြင်းပလ္လင်ထက် ပို၍ အရေးပါသောအရာမရှိပေ။ မိသားစုအားလုံး အိမ်တွင်ရှိစဥ် မိခင် (သို ့မဟုတ်) ဖခင် က ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အရိုးဆုံး အလွယ်ကူဆုံးမိသားစု ဝတ်ပြုခြင်းမှာ ဓမ္မသီချင်းသီဆိုခြင်း၊ မိသားစုဝင်တဦးမှ အဖွင့် ဆုတောင်းခြင်း။ သမ္မာကျမ်းစာကို အကျဥ်းချံုး လေ့လာခြင်း နှင့် မိသားစုဝင်တဦးမှ အပိတ် ဆုတောင်းခြင်းတို ့ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲနက်နဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကိုရှောင်ပြီး လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံဝတ္တု၊ အ့သြဖွယ်ရာ၊ ယေရှုလုပ်ဆောင်ချက်များ ကျမ်းတိုတိုလေး များကို ရွေးချယ်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းတခု ဥပမာ မောရှေ အသက်သာကို အခန်းဆက်အဖြစ် တပတ်လုံး လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၃။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက် အဓိပ္မါယ် ကောက်နှုတ်ရန် အခြေခံမူများ
( Principles of Bible Interpretation )
(၁) သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ မမှားနိုင်သောဝိညာဥ်တော်မှုတ်သွင်းပေးသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ကို အစဥ်သတိရပါ၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အမှားလုံးဝမရှိ။ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုသိစေလိုသောအရာများ၊ သိရန်လိုအပါသော ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ကျမ်းစာတွင် မွတ်ဆိုထားသည်။
(၂) အနက်အဓိပ္မါယ်ကောက်ရန် အခြားမူတခုမှာ သမ္မာကျမ်းစာကို အဓိပ္မါယ် ကောက်သည့်အခါ ရာဇဝင်နောက်ခံသဘောကို အလေးပေးရန်လိုပါသည်။ ဤနောက်ခံသဘောကို ရှုထောင့် (၃)မျိုးမှ လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) ကျမ်းပြုသူ၏ ဘဝအခြေအနေကို လေ့လာပါ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလေ့လာလိုလျင် ထိုအချိန်ကာလတွင် ရှင်ယောဟန်သည် မည်သည့်နေရာ၌ ရောက်နေသည်၊ ဤဆန်းကြယ်သော ဗျာဒိတ်တော်ကို ဘုရားသခင်မှပေးသောအခါ ရှင်ယောဟန် ဘာလုပ်နေသည်ကို နားလည်ထားရန် အရေးကြီးပေသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁း ၁ – ၁၀ ကိုကြည့်ပါ၊)
(ခ) ဒုတိယရှုထောင့်မှာ ရေးထားသော အကြောင်းအရာ (သို ့မဟုတ်) အဖြစ်အပျက်များသည် မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်သည်၊ ထိုတိုင်းပြည်၏ ယဥ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို နားလည်ရန် လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ရုသ ဝတ္တုကို နားလည်ရန် ထိုတိုင်းပြည်တွင် မုဆိုးမများနှင့် ပတ်သတ်သော ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု စသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအကြောင်း အရာနှင့်ပတ်သတ်၌ ဝတ်ပြုရာကျမ်း (၂၅) နှင့် တရားဟောရာကျမ်း (၂၅) တို ့တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
(ဂ) တတိယရှုထောင့်မှာ ကျမ်းစာကိုလေ့လာရာ၌ ထိုအချိန်ကာလက တကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့သော သမိုင်းအခြေအနေနှင့် ဖြစ်ရပ်များပေါ်မူတည်၍ အနက်အဓိပ္မါယ် ကောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကိုလေ့လာသည့်အခါ အရေးကြီးသည့် အချက်မှာ ထိုအချိန်က ပါလေတိနပြည်နယ် တဝှမ်းလုံးရှိ ယုဒလူမျိုးများသည် ရောမအင်ပါယာ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အဖိနှိပ်ခံနေရသည်ကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်သည်။
(၃) ကျမ်းတစောင်လုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တင်ပြချက်အရ ကျမ်းစာကို အနက်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ကျမ်းတိုင်းတွင် တိကျသောရည်ရွယ်ချက်ရှိကြသည်။ ဥပမာ – ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ပဌမစောင် သည် ခရစ်ယာန်များအတွင်သာ ရေးထားသည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပေသည်။ (၁ယော၅း၁၃)
(၄) အနက်အဓိပ္မါယ်ဖွင့်ရာတွင် အရေးကြီးသောမူတခုမှာ ကျမ်းချက်တခုတွင် ပါဝင်သော ကျမ်းပိုဒ်များ၏ ရှေ ့နောက် အကြောင်းအရာ ( Context ) ပေါ်မူတည်၍ အနက်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ ဆာလံ ၁၄း၁ တွင် “ဘုရားသခင်မရှိ” ဟုဖေါ်ပြထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် “မိုက်သောသူသည် ထင်တတ်သည်” ကို ဖတ်မှသာ အဓိပ္မါယ်အတိအကျ ပေါ်လွင်လာမည်ဖြစ်သည်။
(၅) စကားလုံး. ဆိုလိုရင်းကို အဓိပ္မါယ်ပေါ်မူတည်၍လည်း အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ယူပါ။ ဥပမာ – “ဆုတောင်းခြင်း” (Prayer) “ကြားခံဆုတောင်းခြင်း” (Intercession) “ အသနားခံ၍ တိကျသော တောင်းလျောက်ခြင်း” (supplication) အစရှိသော စကားလုံးများ၏ အဓိပ္မါယ် အနည်းငယ်စီ ခြားနားသကဲ့သို ့ဖြစ်သည်။
(၆) သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်နှုတ်သည့်အခါ ဘော်ပြပါ အကြောင်းအရောနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားကျမ်းပိုဒ်များအာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းစာတအုပ်လုံး၏ ဆိုလိုရင်းအကြောင်းအရ လေ့လာပြီး အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ရမည်၊
ကျမ်းစာကို ဖတ်လျင် ဘုရားသခင်မှ လူသားတို့ ကယ်တင်ခြင်းရဘို့ရန် ပေးထားသော နည်းလမ်းကို ကျမ်းစာအစမှ အဆုံးအထိ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားသည်ကို နားလည်လာ လိမ့်မည်။ နားလည်ရန် ခက်ခဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကို တွေ့သောအခါ ကျမ်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ခြံုငုံ၍ မြင်တတ်ရမည်။ ဥပမာ – ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘော်ပြထားသော သားကောင်ယာဇ်များသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံခြင်းသဘောကို ပုံဘော်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤ လွယ်ကူသောနည်းများဖြင့် ကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာလျင် မှားယွင်းစွာ နားလည်မှုများနှင့် တဘက်စွန်းကျ နားလည်မှုများမှ ကင်းဝေးစေမည်။ ထို ့အပြင် ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ပါရှိသော ခက်ခဲနက်နဲသည့် ကျမ်းပိုဒ်များ၏ သွန်သင်မှုများကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပေလိမ့်မည်။
အားငယ်စိတ်ကို မည်ကဲ့သို့ ကျော်လွန်နိုင်မည်နည်း။
မိိမိကိုယ်မိမိ သိမ်ငယ်သည်ဟူသော အားငယ်စိတ်ကို မည်ကဲ့သို့ ကျော်လွန်နိုင်မည်နည်း။ How to overcome feeling of inferiority? သော့ချက် ကျမ်းပိုဒ် ။ ။